Mmepe Ọwa na Nrụpụta Ihe Nzuzo Istanbul | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulMmepe Nke Ikpeazụ gara aga na Kanal Istanbul Project
11 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Channel Istanbul, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ikpeazụ Minute Developments na Istanbul Channel Project: Channel Istanbul Turkey si mega oru anọgide na-eme ikpeazụ-nkeji ndị na na oru ngo. Ọ bụ ezie na ndị a metụtara na Kanal Istanbul na-eche ụbọchị a ga-ekwuwapụta na ọrụ ahụ, ekwuputaghị ụbọchị mbụ igwu ala ma ọ bụ ụbọchị nro ahụ.
Mmepe ohuru na-ewere ọnọdụ na oru ngo Kanal Istanbul. Ọ bụ ezie na agụụ nke ụlọ ọrụ China na-abawanye na ọrụ ahụ, nrụgide US na-aga n'ihu na ọrụ ahụ ka a ga-eduzi ya na Onye Mmekọrịta Nkeonwe.
America na China ebuterela!
Ekwuputara na ụlọ ọrụ ndị America na-achọkwa ikere òkè maka ọrụ ahụ, nke bụ nnukwu uru itinye ego, na ntinye sitere na ụlọ ọrụ ndị China. Dị ka a ga-echeta, Commerlọ Ọrụ Azụmaahịa Istanbul nke Ndị Mmadụ nke China kwuru okwu n'oge gara aga Huang Songfeng kwupụtara mmasị ha nwere na ọrụ ahụ.
N'ikwu na ha chọrọ iso ndị Turkey rụọ ọrụ nke ukwuu, Songfeng kwuru, ken N'okpuru usoro akụ na ụba ahịa China, ụlọ ọrụ na-eme ma ọ bụ na-emeghị ihe ọ bụla maka ọdịmma ha. Ọ bụrụ na ha nwere ike ịkpata ezigbo ego na ezigbo ebe, ha ga-eji obi ụtọ mee ya. Na nke a, enweghị m obi abụọ. Imekọrita ga-abụrịrị na mmeri, ekwenyere m na enwere ndị China nwere nnukwu mmasị n'okwu niile ị na-ekwu ugbu a.
Ha ka na-ekwu ma na-ezukọ. Kedu ihe kpatara na ndị na-azụ ahịa agaghị eme ya mgbe mmeri. Companieslọ ọrụ anyị bụ ọrụ ha na-ewu n'okporo ụzọ yana ọrụ akwa, ike ọkụ, okporo ụzọ ume na ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Turkey bụ ohere maka anyị.
Na-adịbeghị anya ụbọchị, ụfọdụ nke Chinese na-ekwu, sị m, 'Ahụrụ m na telivishọn mgbanwe kwa ike bụghị a agha n'ebe ndịda' m echegbula gị ka m ga-asị na anyị na-ahụ ukwuu ghọtakwuo ha na ị ebe a, ma, ị ga-ahụ na ị na na gị onwe gị anya kama anya, akwụkwọ akụkọ maka kasị mma telivishọn si, "Turkey na-etolite dika ohere.
Thebọchị dị nro nke Kanal Istanbul amabeghị tupu mmezu nke 2019. Atụmanya afọ nke 2020 maka ụbọchị nchikota ikpeazụ nke oru a enwetawo ibu. (emlakxnumx)
Oge Ikpeazụ! Marmaray Flights kwụsịrị
Oge Ikpeazụ Oge Ịdọ aka ná ntị site na TCDD banyere Ọrụ Kasị Elu!
Oge Ikpeazụ! .. Ndị isi General General atọ na Ministry of Transport…
Onye isi ala Arslan, İstanbul
Burulaş Aviation Istanbul - Bursa Ugbu a 25 minit
Doğançay Ripajı Ankara Istanbul YHT Njem…
Gọvanọ Bursa Küçük, Ọnọdụ Kacha ọhụrụ na Nnukwu Ọgbọ ụgbọ elu
Ọnọdụ ikpeazụ na İzmit Akçaray Tram Project
Ọnọdụ kachasị ọhụrụ na arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na Van
Ọnọdụ nke ugbu a na Trabzon Light Rail System Project